Lalatiana Andriatongarivo sy ny ekipany ary nilaza fa i Rinah Rakotomanga no tompon’andraikitra. Fantatra koa fa olon’ny televizionan’ny filoha ihany no nanao ny fanambarana ny horonan-tsary ary tsy natrehin’ny talen’ny seraseran’ny prezidansa akory izany rehetra izany kanefa dia izy no nanatitra ny kapila efa vita tany amin’ny Tvm.
Mpiasa 1200 ao amina orinasa Afaka haba iray no nalefa chomage technique ka tsy niasa intsony nanomboka omaly alatsinainy.Tsy nisy resaka firy, tsy hitanay intsony ny DRH fa taratasy no hitanay hoe mikatona ny orinasa ary mandeha chomage technique izahay, hoy ireo mpiasa.Tsy mazava ny zava-mitrangahoy izy ireo satria ny fitondram-panjakana dia efa nanambara fa tsy alefa chomage technique izany ny mpiasa.Inona izany no ataonay hamelomanay ny fianakavianay, hoy izy ireo.
MANDEHA IHANY NY FANENDAHANA
Mbola misy ihany ny fanendahana eto an-drenivohitra na dia efa mandeha aza ny couvre-feu sy ny fihibohana. Toa vao mainka aza izany mampirongatra ny asan-jiolahy any amin’ny faritra iva satria rehefa tsy misy olona firy mandeha intsony amin’ny alina dia mora hoazy ireo ny manendaka izay tratra farany. Maro ny olona no mitaraina, indrindra fa ireo mody alina noho ny asa ary tsy maintsy mandeha an-tongotra. Handrasan’ny jiolahy fotsiny.
Nafindra ny toerana izay ipetrahan’i Mbola Rajaonah ao Tsiafahy. Any amin’ny toerana mihiboka tanteraka ary tsy tongan’ny antso an-tariby sy ny tambajotran-pifandraisana no nametrahana azy. Nisy feo izay mandeha fa niketrika fanonganam-panjakana izy ary na dia tsy nisy porofo akory izany dia avy hatrany dia nohamafisina tanteraka ny fiambenana azy ao am-ponja ary natoka-monina mba tsy hisy afaka mamangy intsony, na ny fianakaviany aza dia tsy afaka ny mijery azy.
Zazalahy iray no nisy naka an-keriny tao Toliara ary nifanenjehana tamin’iny RN7 iny ny famoahana azy. Voasambotra koa ireo efa-dahy izay nanatontosa an’izany. Raha ny fantatra dia misy hifandraisany amin’ity fangalàna maso izay malaza be any an-toerana ity ary efa nisy maty noho izany ny zaza miisa roa, noho ny finoanoam-poana. Hatao sorona izany ilay zaza ary esorina ny masony, izay no tanjon’ireo olon-dratsy.
Manahy ny mety hisian'ny korontana ara tsosialy ny depiote Tim raha mbola mitohy ny tsy filaminan'ny fizarana fanampiana amin'izao covid19 izao. Efa maro be ireo fitarainana Voaray tamin'ny mponina sasany tsy mbola nahazo na koa zara raha nahazo fanampiana.misy mihitsy ny tezitra ka atahorana ny hitarika any amin'ny korontana izany raha tsy milamina hoy hatrany ny depiote Tim.
TAXI SY TAXI BE
Mahatsiaro ho maty antoka ihany ireo mpitatitra manao taxibe sy taxi na dia nomena fanampiana aza satria izy ireo irery no tsy avela hiasa. Ny taxi brousse sy ny sidina mba nomena andro vitsy iasana mba hanarenana ireo andro maro tsy niasana fa ny taxi Be tsy mba izany. Milaza ny hanao hetsika hitaky izany izy ireo.